घरमा बसेर सगरमाथा पुग्न सकिँदैन – आचार्य – NepalayaNews.com
शिव बाँनियाद्धारा न्युयोर्क च्याप्टर अध्यक्षको लागी उम्मेदवारी
अमेरिकाका वैज्ञानिकले बताए आयु बढाउने उपाय
अमेरिका-मेक्सिको सिमानामा सवारी दुर्घटना, १३ जनाको मृत्यु
नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक योद्धासंग अमेरीकामा अन्तरर्क्रिया
अत्यन्त मिजासिला तथा मिलनसार व्यत्विका धनी धनराज आचार्य विभिन्न सघं सस्थासग आवद्द रहेका छन् । पोखरालाई आफ्नो कर्मथलो बनाएका आचार्य यति वेला एमाले समर्थित ब्यपारीहरुको सगठन नेपाल राष्टिय वाणिज्य संघको केन्द्रिय अध्यक्ष, लायन्स क्लब अफ इन्टरनेशनल डिष्ट्रिक ३२५बी १ नेपालको प्रथम डिष्ट्रिक गभर्नर रहेका छन् ।
नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महांसघको पूर्व केन्द्रिय अध्यक्ष रहीसकेका उनी युनाइटेड नेपाल पव्लिकेशन हाउस सगँ पनि आवद्द रहेका छन् । उनी पोखराको पृथ्वी नारायण क्यापसको पूर्व स्ववियु सभापति समेत भईसकेका छन् । विशेष गरी सानो व्यवसाय वाट शुरुवात गरेका आचार्यले व्यवसायमा निरन्तर मेहनत तथा दृड अठोटले नै सफल्ता हात पार्न सकिने बताउछन । बिदेशमा वस्ने नेपालीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्ने राम्रो वातावरण रहेकोले लगानी गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । आचार्यसँग नेपालयका लागी मनोहरि पौडेलले विभिन्न समसामायिक विषयवस्तुमा रहेर गरेको कुराकानीका अशंहरुः
धनराज आचार्यलाई के भनेर चिन्ने ?
राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले राजनीतिक व्यक्तिका रुपमा चिन्छन धेरैले । तर अहिले उद्यमी व्यवसायीको रुपमा परिचय बनिसकेको छ ।
तपाईं हाल एमाले समर्थित ब्यपारीहरुको सगठन राष्ट्रिय वाणिज्य संघको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, के फेरी राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको हो ?
राजनीति समाजसँग जोडिएको विषय हो । समाजको हरेक पक्षसँग राजनीति जोडिएकै हुन्छ । पृष्ठभूमिका हिसाबले पनि म राजनीतिबाटै आएको हुँ । पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको स्ववियु सभापति भएको मान्छे, मभन्दा अगाडिका सबै सभापतिहरु पनि सांसद, मन्त्री बनिरहेको अवस्थामा, मान्छेहरुले प्रशस्त संभावना रहेको, प्रष्ट वक्ता, सबै हिसाबले तपाईं राजनीतिमा किन नआउने भनेर गरिने प्रश्न रातदिन मैले ब्यहोरिरहेकै छु । तर अहिले केवल पार्टीको राजनीतिलाई मात्रै राजनीतिक क्षेत्र भनेर बुझ्नु हुँदैन । अब नेकपा एमालेले नवौं महाधिवेशनबाट अबको कामको फोकस समृद्धीको आन्दोलन हुनुपर्छ र सबै पार्टीको पंक्ति उत्पादनको काममा लाग्नुुपर्छ भनेर घोषणा गरेको हुनाले मैले त २० वर्ष अगाडि नै सहि निर्णय गरेको रहेछु भन्ने अवस्थामा पुगेको छु । त्यस हिसाबले उद्यमी व्यवसायी क्षेत्रबाट पनि राजनीतिमा जान सकिन्छ र पार्टीको नजिक रहेको जनसंगठनसँग नजिक रहेको हिसाबले राजनीतिबाट बाहिर रहेको भन्न मिल्दैन । तर अहिले पार्टीगत रुपमा महानगर पालिकाको मेयरको रुपमा चुनावमा आउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तपाईंको प्रश्न हो भने त्यो आवश्यकताको कुरा हो । साथीहरुले तपाईं पोखरा महानगरपालिकाको मेयर हुनुपर्छ भनेर पनि प्रश्ताव गर्नु भएको छ । भोलि परिस्थितिले बनायो भने म त्यहाँ फर्कन्न भन्ने पनि छैन तर अहिले मेरो प्राथमिकता त्यो छैन । मेरो प्राथमिकता उद्यम, व्यवसाय क्षेत्र हो । म कम्तिमा अबको ३ वर्षमा मेरो संस्थामा एक हजार जनाले काम गरुन भन्ने चाहन्छु । त्यतै नै मेरो ध्यान छ ।
उद्योगी व्यापारीको संगठनमा पनि राजनीति घुस्नु राम्रो हो र ?
होइन । यसलाई त्यसरी भन्न मिल्दैन । हाम्रो उद्देश्य उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुलाई निराकरण गर्दै राज्यसँग पनि पुलको काम गर्ने हो । सैदान्तिक हिसाबले नेकपा एमालेले उठाएका विषयसँग सहमत छौं । तर यसलाई राजनीतिगत हिसाबले बुझ्नु हुँदैन । यो विशुद्ध व्यवसायिक संगठन हो । यसले उद्यमी व्यवसायीको पिरमर्काका सम्बन्धमा काम गर्छ भने अर्को समग्र नेपालको आर्थिक उत्थान र समृदीको दिशामा एउटा वर्ग विषयको आन्दोलनलाई अगाडी बढाउँदै जनताहरुको आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गराउनको लागि प्रगतिशील सोचाइका साथ अगाडी बढ्दै, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रबाट पनि सहयोग गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता अगाडी बढाउँदै काम गरिरहेका छौं । यसलाई राजनीतिका रुपमा बुझ्नु हुँदैन । हामीले त्यहाँ राजनीतिक कुरा गर्दैनौं ।
तपाईं पब्लिकेशन हाउससँग पनि आवद्ध हुनुहुन्छ, के पब्लिकेशन हाउसहरु पुस्तक नीतिअनुसार चलेका छन् ?
नेपाल सरकारको अहिलेसम्म पुस्तक नीति नै छैन । नेपाल सरकारले सन् १९७२ मा पुस्तक नीति बनाउने भनेर युनेस्कोमा हस्ताक्षर गरेर आयो तर अहिलेसम्म बनेन । म पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष भएको बेला नेपाल सरकारलाई पुस्तक नीति बनाउ भनेर सुझाव दिएका थियौं । यो वर्ष मन्त्रीपरिषदको स्तरमा त्यो पुगेको छ । त्यस हिसाबले पुस्तक प्रकाशनको क्षेत्रमा जेजति समस्या छन् ती समस्या पुस्तक नीति आइसकेपछि त्यसले बनाएको नियम अनुसार चल्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । तर अहिले नीति नै नभएकोले जसरी चले पनि भयो । यसमा अहिले समस्या र विकृती पनि छन् तिनलाई हटाउनको लागि सबै व्यवसायीहरु मिलेर सकारात्मक सोचका साथ अगाडी बढौं भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जहाँसम्म मेरो पब्लिकेशन हाउसको कुरा छ हामीले न्युनतम सबै कुरा पालना गरेका छौं ।
निजी विद्यालयका पुस्तकमा ब्रह्मलुट भएको छ भन्छन नि अभिभावकहरु ?
यो विल्कुल होइन । मेरै पालामा मेरै पहलमा सरकारले मूल्य निर्धारणको लागि आयोग पनि बनाओस् भनि माग पनि गरेको हुनाले संसारमा मान्छेहरुले यस्तो पनि हुँदोरहेछ भनेका छन् । स्वयं व्यवसायीले सरकारले मूल्य तोकिदेओस् भनेर माग गरेको पहिलो पटक होला । हामी आफ्नै पहलमा पुस्तकमा मूल्य निर्धारण गरियोस् भनेर माग गरेको हुनाले मूल्य निर्धारण समिति बन्यो र त्यसमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व मैले नै गरेको हुँ । त्यही अनुसार सबै प्रकाशन गृहको एउटै मूल्य छ । पहिला आफू खुशी मूल्य निर्धारण गरिएको थियो तर अहिले त्यस्तो सबै हटेको छ । सरकारले नै दिएको मूल्यसूचीका आधारमा मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।
श्रीमती पुष्पाको साथमा धनराज आचार्य
तपाईं सानो व्यवसायबाट सुरुवात गर्नुभएको व्यवसायी आज यो स्थानसम्म कसरी आइपुग्नु भयो ?
यो एउटा समपर्ण हो, दृढ इच्छाशक्ति हो र लक्ष्य हो । सबैभन्दा पहिला तपाईं हिँड्ने बाटो कुन हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु प¥यो । कहाँसम्म जाने हो ? कुनकुन साधन स्रोत प्रयोग गरेर जाने हो ? कुन गतिमा जाने हो ? तपाईंसँग आफ्नो लक्ष्य हुनुपर्यो । त्यो अनुसार कामको व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । सगरमाथा चढ्छु भनेर घरमा बसेर त चढ्न सकिँदैन । त्यसको लागि तयारी गर्नुप¥यो, हिँड्ने प्रयास गर्नुपर्यो । योजना बनाउनु प¥यो । आधार शिविरसम्म पुग्ने प्रयास गर्नुप¥यो । त्यसपछि फेरी माथि जाने तयारी गर्नुप¥यो । पुग्छु भनेर इच्छा मात्रै राखेर घरमा बसेर त सगरमाथा पुग्न सकिँदैन । तपाईं जुन व्यवसायमा लागे पनि तपाईंसँग लक्ष्य चाहियो र त्योअनुसारको योजना चाहियो । आगामी ५ वर्षभित्र तपाईं कहाँ पुग्ने ? १५ वर्षभित्र कहाँ पुग्ने योजना बनाउनु प¥यो । तपाईंसँग इच्छाशक्ति, योजना र सँगसँगै योग्यता पनि चाहियो । मैले मेरो लक्ष्य निर्धारण गरेको छु र त्यही अनुसार पूरा भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
पुस्तक प्रकाशन बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि हात हाल्ने योजना छ कि छैन ?
म धेरै क्षेत्रमा आवद्ध छु । मैले भर्खरै विराटनगरमा रासायनिक मलको ठूलै लगानीको उद्योग स्थापना गरेको छु । त्यो संचालनमा आइसकेको छ । पाँचथरमा १५ मेगावटको हाडड्रोपावर स्थापना गरेका छौं जुन यहि महिनामा सन्चालनमा आएको छ । कास्कीमा ४४ मेगावटको ठुलो प्रोजेक्टको तयारी अवस्थामा हामी रहेका छौ । बैक तथा वित्तिय संस्थाहरु लगाएत दजौनौ अर्गनाइजेसनहरुमा मेरो सग्लनता रहेको छ । व्यवसायमा मेरो डाइभर्सिटी छ । मुख्य व्यवसाय भने पुस्तक प्रकाशन नै हो ।
विदेशमा रहेका नेपालीले हाल नेपालमा लगानी गर्ने अवसर कस्तो छ ?
प्रशस्तै छ । म त सकेसम्म विदेश नै नजानुहोस् भन्छु । विदेश गइसकेका नेपालीलाई पनि नेपालमा लगानीको प्रशस्तै सम्भावना छ । विदेशीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्नका लाग केही समस्या भए पनि जो नेपालीहरु नै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई सबैखालको काम गर्नको लागि ढोका खुल्ला छ । विदेशमा बसेर कमाएको पैसा यहाँ लगानी गर्न सकिन्छ । उहाँहरुलाई आएर छलफल गरौं भन्न चाहन्छु, मञ्च खुल्ला छ ।
एनआरएनले नेपालमा लगानी गर्नको लागि सरकारले राम्रो वातावरण बनाएको छ त ?
गरिरहेको छ । उपेन्द्र महतो, जिवा लामिछानेले गर्न सक्ने अरुले गर्न नसक्ने भन्ने हुन्छ र ? उहाँहरुले ठूलो पुँजीमा गर्नुभयो होला तर हामी यहाँ बसेर पनि सानो पुँजीबाट सुरु गरेर करोडौंको प्रोेजेक्ट गरिसकेका छौं भने विदशमा रहने साथीहरुले गर्न नसक्ने भन्ने कुरै छैन । जवानी छइन्जेल विदेशमा रगत र पसिना बगाएर हामीले त्यो भूल नगरौं । काम गर्न सक्ने छँदाखेरी नै स्वदेश फर्कौं । यहिँ उत्पादन गरौं । जति सकिन्छ रोजगारी श्रृजना गरौं । खाडी मुुलुकमा गएर दिनमा ४÷५ वटा लाश फर्कनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरौं । बाहिर बस्ने साथीहरुले पनि अब ढिला नगरौं भन्छु म त ।
तपार्इंं लायन्स क्लब अफ इन्टरनेशनल डिष्ट्रिक ३२५बी १ नेपालको प्रथम डिष्ट्रिक गभर्नर पनि हुनुहुन्छ, के लायन्स क्लबले सच्चा सेवा गरे जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
लायन्स क्लब संसारको सबैभन्दा ठूलो सेवा संगठन हो । यसले मानवीय सेवा गर्छ र आफूभन्दा बढी समस्या भएका र आफूले भन्दा कम अवसर पाएकालाई सहयोग गर्ने यसको उद्देश्य हो । त्यही उद्देश्यअन्तर्गत लायन्स क्लब सञ्चालित छ । नेपालमा २४ हजारको हाराहारीमा लायन्स क्लब छन् । यसको स्थापना भएको अर्को वर्ष १०० वर्ष पुग्दै छ । नेपालमा यसको स्थापना भएको ४५ वर्ष पुग्यो । नेपालमा अन्धोपन निवारणमा यसले विशिष्टता हासिल गरको छ । अर्को वर्षबाट हामिले मधुमेहका विरामीलाई सेवा पु¥याउने योजना बनाएका छौं ।
लायन्स क्लबमा आवद्ध भएपछि विदेश जान सजिलो हुने भएकोले आवद्ध भएको भन्नेहरु धेरै छन् नि ?
त्यो गलत कुरा हो । वर्षको १÷२ वटा कार्यक्रम विदेशमा हुन्छ । कार्यक्रमको निमन्त्रणमा त्यहाँ गएर सिक्न, बुझ्न जाने हुन सक्छ, अवसर चाहिँ छ । तर विदेश नै जानको लागि सदस्य बन्ने हुँदैन । लायन्स क्लब अलि खर्चिलो पनि छ । सेवा गर्नुपर्ने क्षेत्रमा हामी आफैंले व्यक्तिगत खर्च गर्छौं । त्यसैले विदेशै जानका लागि त अरु हिसाबले पनि जान सकिन्छ ।
नेपालय पत्रिकामार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ ?
स्वदेशमा लगानी गरर्यौं भने स्वदेशमा रोजगारी पनि श्रृजना हुन्छ, उत्पादन पनि हुन्छ । आत्मसन्तुष्टि पनि बढ्छ । घर परिवार, आफन्तको सहयोगले पनि नेपालमा लगानी गर्न सकिन्छ । सानोसानो पुँजी जम्मा गरेर ठूलो प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ । हामीले मेघा बैंकको सुरुवात ग¥यौं । त्यतिवेला नेपालमा यो सम्भव छैन भनेका थिए मान्छेहरुले । १२ सय प्रमोटरहरु भएर पनि मेघा बंैक अहिले नेपालको लिडिङ बैंक भएको छ । मेघा मोडेल नेपालको विकासको मोडेल हो । त्यहि मोडलमा पनि नेपालमा काम गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगन पुँजीमा मात्रै काम गर्न सकिँदैन । मिलेरै काम ग¥यौं भने काम गर्न सकिन्छ । एनआरएनका लिडरले नेपालमा ठूलो काम गर्नुभएको छ । अब लिडरले मात्रै होइन सबै एनआरएनका सदस्यलाई मिलेर काम गरौं भन्न चाहन्छु ।
हाम्रो नयाँ पार्टी लोकतान्त्रिक वामपन्थी शक्तिसँग निकट हुनेछः त्रिपाठी (अन्तर्वार्ता)	२ फाल्गुन २०७७, आईतवार १५:२०
व्यवसायीका बिचमा रहेर खेलेको भुमिका नै मलाई गर्ने मुल्याङकन हो	२२ पुष २०७७, बुधबार १५:३९
२० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन मिल्ने गरि अध्यादेश ल्याउने ओलीको तयारी रहेछ – खनाल	१८ असार २०७७, बिहीबार १५:१५
सर्बेन्द्रलाई अपहरणको आरोप लगाएर बिरोधीले मन शान्त गर्न खोजे	२७ बैशाख २०७७, शनिबार ०२:०६
भाडामा बस्नेले विद्युत् महसुल छुट पाउँछन्– ऊर्जामन्त्री पुन(विशेष अन्तर्वार्ता)	२९ चैत्र २०७६, शनिबार ११:१६
जनगणनामा हामीले हाम्रो संख्या देखाउनु जरुरी छ : नर्बदा क्षेत्री , अधिकार	२३ माघ २०७६, बिहीबार ००:२५
२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार २२:३३
नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक योद्धा संग अन्तर्क्रिया ११ पुष २०७३, सोमबार १४:५३
न्युयोर्क, अमेरिका: आज मार्च २, २०२१ मा यस गिरिजा..
शिव बाँनियाद्धारा न्युयोर्क च्याप्टर अध्यक्षको लागी उम्मेदवारी ११ पुष २०७३, सोमबार १४:५३
अमेरिका-मेक्सिको सिमानामा सवारी दुर्घटना, १३ जनाको मृत्यु ११ पुष २०७३, सोमबार १४:५३